Tsy ambanin-javatra, tsy ambin-javatra… | NewsMada
Tsy ambanin-javatra, tsy ambin-javatra…
Mby aiza ny hoe fanovana amin’izao? Indrindra ny fampandrosoana… Eo ny vahoaka mahita sy mahatsapa izay iainany isan’andro. Mandinika sy mitsara ary mampitaha ny taloha amin’ny ankehitriny: efa misy fihatsarana? Na inona na inona ataon’ny fitondram-panjakana, ho an’ny vahoaka ifotony ny ankamaroany sy amin’ny ankapobeny.
Hatramin’izay, saika hadino na ambanin-javatra sy ambin-javatra ihany ny fiainam-bahoaka. Eny, na misy ihany aza ny ezaka amin’ny karazana tetikasa etsy sy eroa: tsy mahasehaka ny besinimaro, tsy maharitra, tsy mahafa-bela amin’ny fahantrana… Ahoana amin’izay àry izay fanatsarana fiainana izay amin’izao hoe fanovana sy fiovana izao?
Anisan’izany, ohatra, ny fampanjakana ny fandriampahalemana, ny fanamavainana ahay ny fidangan’ny vidim-piainana, ny fanamorana ny famoronana asa… Tsy latsak’izany koa, ohatra, ny amin’ny fanatsarana ny tontolon’ny fahasalamana sy ny fampianarana, ny famatsiana rano madio fisotro na an-drenivohitra na ambanivohitra…
Tsy takona afenina, efa misy ny ezaky ny fitondrana foibe amin’izay hoe fampanjakana ny fandriampahalemana izay, ohatra. Eo koa ny tetikasa Fihariana amin’ny famoronana asa, ny fizarana kojakojam-pianarana eo amin’ny sehatry ny fampianarana, ny fimasoana ny amin’ny famatsiana rano madio fisotro ho an’ny rehetra… Inona na ahoana koa?
Na ahoana na ahoana, amin’izao fifidianana kaominaly izao: tsy azo odian-tsy hita ny amin’ny anjara toeran’ny fampandrosoana ifotony; eny, na eo aza ny ezaka ataon’ny fitondrana foibe. Izay no anisan’ny maha zava-dehibe ny fijerena sy fandinihana ny tetikasa aroson’ireo kandidà ben’ny Tanàna sy ireo kandidà mpanolotsain’ny Tanàna.
Izy ireo no hiantoka ny fampandrosoana akaiky sy mivantana ny vahoaka ifotony. Anjaran’ny mpifidy ny mandinika sy mitsara ary mampitaha: iza no tena manana vina sy fandaharanasa azo antoka hitondra fampandrosoana, azo tanterahina, hahombiazana…? Tsy ambanin-javatra sy ambin-javatra intsony tsinona ny fiainan’ny vahoaka ifotony.